Zụta BMS-564929 ntụ ntụ (627530-84-1) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / SARMS / BMS-564929 ntụ ntụ
Rating: SKU: 627530-84-1. Category: SARMS
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke BMS-564929 ntụpụ (627530-84-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
BMS-564929 ntụ ntụ bụ onye nyocha nke na-eme nchọpụta na androgen receptor modulator, bụ nke Bristol-Myers Squibb mepụtara maka ọgwụgwọ mgbaàmà nke ịda mbà na etrogen na ndị ikom ("na-atụgharị"). Mgbaàmà ndị a nwere ike ịgụnye mkpụrụ obi, nkwụsị nke ike ahụ na ike, mbelata libido na osteoporosis. Dabere na nchọpụta ndị a, BBMS-564929 ntụ ntụ yiri ka ọ bụ ezigbo SARM anabolic
BMS-564929 ntụ ntụ vidiyo
I.BMS-564929 ntụ ntụ isi agwa:
aha: BMS-564929 ntụ ntụ
Usoro Molecular: C14H12ClN3O3
Molekụla arọ: 305.71638
Melt Point: 175-184 ° C
Nchekwa Nche: Akọrọ, ọchịchịrị na 0 - 4 Celsius C maka obere oge (ụbọchị ruo izu) ma ọ bụ -20 Celsius C maka ogologo oge (ọnwa ruo afọ)
BMS-564929 uzuzu (627530-84-1) n'ime usoro okirikiri
BMS-564929 ntụ ntụ aha
Nzuzo BMS-564929 ntụ ntụ
BMS-564929 uzuzu bu ihe di ike nke oma, ihe omuma nke oma, onye na-ahuta ihe onu na etrogen (AR) modulator. BMS-564929 ntụ ntụ bụ onye na-ahụ maka nje AR na-emepụta na vitamin, dị oke aka maka ndị AR na ndị ọzọ na-anabata ihe ndị na-agwọ ọrịa steroid, na egosighi mmekọrịta dị mma na SHBG ma ọ bụ aromatase. Nnyocha ọmụmụ ihe na ụmụ nwoke na-egosi na BMS-564929 raw ntụ ntụ dị nnọọ ike karịa testosterone (T) na-akpali akpali nke uto nke levator ọbụna muscle, na n'adịghị ka T, nke kachasị mma maka ahụ ike vs. prostate.
BMS-564,929 bụ otu ụdị dị ugbu a n'oge ọkpụkpụ nke ụmụ mmadụ, bụ nke na-arụ ọrụ nke ọma, nke nwere ike ịhọrọ ma na-ahọrọ ihe maka ndị na-anabata etrogen (Ki 2.1nM, 20x functionality selectivity for muscle tissue over prostate) na na ọmụmụ na oke raara ya. na-eme ka mbelata aka na oke oge, na nrịta dị elu ọbụna na-amụba ụzụ muscle, na-enweghị mkpa ọ bụla na-emetụta anụ ahụ prostate. Ma ọ bụ na ọ bụ ebelata ọnụ ọgụgụ nke hormone, na ọ bụ 33x nke na-eme ka ihe nkwụsi ike karị karịa testosterone, nke nwere ike ịbụ nsogbu na ụmụ mmadụ iji ọgwụ.
BMS-564929 raw ntụ ntụ na-ejikọta aka na androgen receptor ma ọ bụghị ndị ọzọ steroid anabata. BMS-564929 ntụ ntụ adịghị enwe mmekọrịta na SHBG ma ọ dịghị egbochi aromatation. Nnwale na oke na-egosipụta ọrụ anabolic ka mma mgbe ahụ testosterone propionate n'otu ụdị ahụ, na ọrụ dị ala androgenic dị ala. N'ihe dị elu BMS-564929 raw ntụ ntụ na-egbochi hypothalamus na \_ ma ọ bụ olulu na n'ụzọ dị otú a na-ebelata ọrụ nzuzo nke LH na FSH.
Ihe X-ray nke mgbagwoju nke bMS-564929 na LBD nke onye na-anata androgen na-egosi ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti BMS-564929 raw ntụ ntụ na dihydrotestosterone na mmekọrịta ha na LBD nke onye nkwụnye ahụ. Ọdịiche ndị a yiri ka hà buru ibu iji mee ka usoro mgbasa ozi nke mmetụta anabolic dị na uru ahụ, ọ bụghị mmetụta androgenic na prostate. Ọ dịbeghị anya n'ụzọ doro anya ka esi kọwaa ọdịiche dị iche iche.
BMS-564929 ntụ ntụ dị n'ọnụ ma nwee mgbanwe mgbanwe metabolic dị nwayọọ mgbe na SARM proionamide. Oge ọkara ndụ dị iche site na 8 ruo 14 awa, na obere dose ga-ekwe omume.
Ịdọ aka ná ntị na ntụpọ BMS-564929
BMS-564929 ntụ ntụ bụ onye na-eme nchọpụta androgen receptor modulator (SARM) nke Bristol-Myers Squibb na-emepe maka ọgwụgwọ nke mgbaàmà nke nkwụsị afọ metụtara ogo androgen na ụmụ nwoke ("andropause"). Mgbaàmà ndị a nwere ike ịgụnye ịda mba, ụfụ akwara na ike, mbelata libido na osteoporosis. Ọgwụgwọ na testosterone dị oke irè iji gbochie mgbaàmà ndị a mana ejikọtara ya na ọtụtụ mmetụta dị iche iche, nke kachasị njọ bụ ịmụba nke prostate gland, nke nwere ike ibute ọrịa hypertrophy na-adịghị mma na ọbụna ọrịa kansa prostate. Nke a pụtara na enwere mkpa maka ahụike maka ndị modulators na-ahọrọ etrogen, bụ nke na-ebute mmetụta anabolic n'ụfọdụ anụ ahụ dịka mọzụlụ na ọkpụkpụ, mana na-enweghị ndị na-anabata etrogen na-akpali akpali na prostate.
BMS-564929 ntụ ntụ bụ onye na-enye ezigbo andutu receiver (AR) modulator na njirimara Ki na 2.11 ± 0.16 nM.
AR bụ ụdị nke nyocha nuklia nke hormones na-etrogenic, testosterone, ma ọ bụ dihydrotestosterone. Ọrụ dị mkpa na-achịkwa ikuku mkpụrụ ndụ.
BMS-564929 raw ntụ ntụ bụ agonist kpọmkwem anụ ahụ maka AR na usoro ịdị ọcha hydantoin. BMS-564929 ntụ ntụ bụ ihe gbasara 400-a na-ahọrọ maka AR na PR na karịa 1000-a họrọ maka AR vs. GR, MR na ER na β. Na C2C12 myoblast cell line, BMS-564929 raw ntụ ntụ na-egosi na ike nke 0.44 ± 0.03 nM tụnyere 2.81 ± 0.48 nM atụpụtara maka testosterone.
N'ịkpa ụmụ nwoke na-akpụ akpụ, obere BMS-564929 ntụ ntụ dị nnọọ ike karịa testosterone (T) na-akwalite uto nke levator ọbụna muscle, ma dị oke nhọrọ maka ahụ ike vs. Prostate. Ebe ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ nhicha ahụ, BMS-564929 uzuzu na-atụ anya na ọ ga-emepụta uru dị mma n'ahụ ahụ na anụ ndị ọzọ na-enwe nchebe dị mma karị.
BMS-564929 Kacha Powder
Raw BMS-564929 powder Marketing
Esi zụta BMS-564929 ntụ ntụ si AASraw
YK11 ntụ ntụ